Ballet Tutu yakatanga uye ichivandudza sei? - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Ballet Tutu yakatanga uye ichivandudza sei?
Mukutangaballet tutuzvipfeko, nekuti mabhaleti akarongedzwa nedare, vatambi vakakurumbira vaive vese vemhuri yehumambo yeFrance. Zvipfeko zveballet panguva ino zvaive neakasimba "Baroque" maitiro. Yakawedzeredzwa, zvipfeko zveumbozha uye zvakaomarara zvishandiso ndizvo zvakakosha zveiyi nguva. Vatambi vachapfeka mamaki anonakidza uye akawedzeredzwa ematehwe, uye havana kujeka sezvavari izvozvi, kunyanya vatambi vechikadzi, vese vari zvipfeko zvematare epakati uye madhirezi anomhara, ayo anokanganisa mafambiro evatambi. Panguva ino, mutambi webharlet-Mary Camargue akaonekwa. Akashinga kucheka siketi pfupi, achibvumira vatambi kupfeka zvakapusa uye kupedzisa hunyanzvi hwemakumbo. Uku kusimudzira kwakaisa hwaro hwekusimudzira ballet yekuita hunyanzvi.
Kana zvasvika paballet, munhu wese anonyanya kuzivikanwa ne "Swan Lake", mufananidzo wechena chena, yakanaka yekutamba mamiriro, uye yechinyakare "Four Little Swans". Iyo gauze skirt yaive pfupi uye ipfupi zvakare, kubva pasi pebvi kusvika pamusoro pebvi. Iko kukura kwese kwakachinja kubva kuFrance kuenda kuRussia, uye iyo "classical ballet" nguva yakatanga.
Iyo yekutamba siketi mu "Swan Lake" inoenderana nemisimboti yemabioniki, iyo inowedzera kureba kusvika pakunyanyisa, uye panguva imwechete inopararira yakatenderedza. Iyo inoumbwa nezvikamu zvina kana zvishanu zvezvimedu zvesilika zvakapetwa, semapapiro machena anovheyesa hanzi, uye siketi yacho yakasungirirwa kune yemutambi Pane kamisole kakakodzera saizi yemuviri, vhudzi rakamonerwa rinopfeka ngowani chena yemusoro. Iyi seti yemasiketi ekutamba yakadomwa seyakajairika mutambo siketi weballet, uye yanga ichishandiswa nhasi uye inonzi "Tutu siketi".
Chipfeko chemazuva ano che ballet
BalletVatambi vanopfeka zvipfeko zvakagadzirwa. Kwavari, tsika mbatya hadzisi dzekunaka chete, yega yega inoshanda kwazvo. Icho chinonyanya kukosha kudiwa ndechekudzivirira.
Tights uye tights ndizvo zvekutanga tsika mbatya. Mune zvekareballetnguva, vakadzi vanowanzo pfeka matinji matema uye epingi matinji. Kune akawanda masitayera evakadzi tights mune ano ballet, senge vanomisa, vasina maoko, mapfupi maoko, 3/4 maoko, maoko marefu, uye yakadzika U uye mwenje kumashure. U, chimiro chekora chinowanzo kuve chakaumbwa seV, uye vamwe vane kakapetwa kadiki pachipfuva, uye kune tambo dzakakora-refu uye dzakareba-maoko dzinogona kupfekwa kana iwe uchida kudziya. Kune mavara akasiyana siyana, mutsvuku, bhuruu, uye shava ndiwo akajairika. The fabric inowanzo gadzirwa nedonje, iyo inobata ziya asi haina kusimba; nylon yakasununguka zvakanyanya asi ine husina kukwana sweat yekumwesa kugona. Kune zvakare velvet yepamusoro muviri uye donje repasi muviri, asi mutengo wacho unodhura.
Vatambi vechikadzi kazhinji havapfeke zvinonamira, masokisi chete uye masiketi. Kazhinji kutaura, nylon ndiyo inonyanya kufarirwa mu pantyhose. Kune masokisi ekutamba ane maburi mumakumbo etsoka, ayo anogona kubvisa marwadzo etsoka panguva yekutamba. Pasina tsoka pantyhose inopfekwa nevamwe vatambi vane hunyanzvi. Kureba kwacho kubva pachiuno kusvika kumagaro. Iko kune kazhinji mhando ina dze gauze masiketi: masiketi e-gauze-mapfupi-gauze, masiketi-kureba gauze masiketi, masiketi e gauze ane pfupi pfupi kumberi uye kureba kumashure, uye akadhindwa masiketi e gauze kubva kumucheto kusvika kumhuru.
Uye zvakare, vasikana vane vhudzi refu vanofanirwa kusunga bvudzi ravo kumusoro uye kurimonera. Ikoko hakufaniri kuva nevhudzi rakasununguka, kuitira kuti rirege kukanganisa kufamba. Zvishongo hazvibvumirwe mukirasi, nekuti zvinogona kuitika kana uchiita mafambiro makuru. Uchakuvara iwe kana vamwe musingazivi.
Muzhinji, zvisinei kuti ndeipi mhando yemapfekero, chakakosha chinhu chakanyatso kukodzera, kuitira kuti iyoballetmudzidzisi anogona kukurumidza kutsvaga kukanganisa kwemutambi mukufamba uye nekuzvigadzirisa nekukasira.
Tevere:Chii chinonzi Tie-dyeï¼Ÿ